Zvinoreva mazita evatambi
You are at:Home»NHAU DZEMITAMBO»Zvinoreva mazita evatambi
By Abel Ndooka on	 June 30, 2017 · NHAU DZEMITAMBO
MAZITA emadunhurirwa evatambi venhabvu vakasiyana vemunyika muno ane zvaanoreva here uye ndiani anombovatumidza mazita aya?
Kwayedza svondo rino yakaita ongororo pamusoro penyaya iyi ndokuona kuti mazita evatambi vazhinji emadunhurirwa vanoatumidzwa zvichienderana nematambiro avanenge vachiita mutambo uyu. Asi, kune vamwe vanopihwa mazita aya kuburikidza nejambwa rinenge ravawira muhupenyu hwavo sezvakaitika kuna Hardlife ‘Nairobi’ Zvirekwi mutambi weCAPS United.
Zvirekwi akatumidzwa zita remadunhurirwa iri zvichitevera kusiiwa kwaakaitwa nendege kuNairobi rinove guta guru renyika yeKenya mushure mekunge arasa pasipoti yake apo akange aenda nemaWarriors kumutambo wekukwikwidza kuenda ku2014 World Cup. Vamwe vatambi vakanetsa kare munhabvu zvekusvika pakutumidzwa mazita emadunhurirwa vanosanganisira George ‘Mastermind’ Shaya, Japhet ‘Short-cat’ Muparutsa, Stanford ‘Stix’ Mutizwa, Shacky ‘Mr Goals’ Tauro, Misherk ‘Scania’ Chidzambwa, Charlie ‘Bhasikoro’ Jones naPeter ‘Thunderboots’ Nyama.
Shaya panguva yake aizivikanwa saMastermind, zvichireva kuti mutambi uyu aive nyanzvi munhabvu. Kwayedza nguva yadarika yakamboita hurukuro naShaya apo akataura kuti zita iri akaripihwa nevatsigiri venhabvu avo vaiyemura matambiro aaiita.
Zvakadai, Kwayedza svondo rino yakaita hurukuro neshasha yekuongorora nhabvu, Charles ‘CNN’ Mabika – uyo anove zvakare nyanzvi yekushamarara mutambo uyu – pamusoro pemazita emadunhurirwa evatambi venhabvu aya. Mabika ndiye mumwe wevamwe vanotumidza vatambi mazita aya.
Anoti anotumidza vatambi mazita emadunhurirwa zvichienderana nematambiro avanenge vachiita. Mabika anoti akatanga kutumidza vatambi mazita aya mushure mekunge akazviona kuSouth Africa uko vatambi vazhinji veko vanopihwa mazita emadunhurirwa avanenge vachizivikanwa nawo kuzvikwata zvavo uye nevatsigiri.
Vamwe vevatambi vakatumidzwa mazita emadunhurirwa naMabika vanosanganisira Norman ‘Muchina wemajuzi’ Mapeza, Zvirekwi (Nairobi), Max ‘Skara’ Makaza uye naJoel Ntouba ‘Baba Dhikondo’ Epoupa mutambi weDynamos anove chizvarwa chekuCameroon.
“Mazita emadunhurirwa anoenderana nematambiro anenge achiita munhu izvo zvinondituma kuti ndimutsvagire zita rinoenderana naye. Asi ini handitsvage zita rinonyomba nekuti handidi kusvibisa mutambi iyeye, ndinototanga ndataura naye kuti ndakuwanira zita kana achirida ndotanga kumushevedza naro.
“Izvi ndakazvitanga ndaona zvinoitwa kuSouth Africa uko mutambi wese weko anopihwa zita rake remadunhurirwa ndikafunga kuzvitangisawo muno,” anodaro.
Mabika anoti mamwe emazita emadunhurirwa aanotumidza vatambi anoanzwa kunzvimbo dzakasiyana uko anenge achitandara.
“Mamwe mazita ndinogona kuanzwa kana kunzvimbo dzatinotandarira uko ndinonakirwa naro ndozongorisimbisa.
“Saka ini handidi kunzi ndini ndamupa, ndinotoedza kuti vatangisa zita iri vazivikanwe,” anodaro.
Mapeza zita rekuti Muchina wemajuzi akaripihwa mugore ra1995 apo akatamba zvinonwisa mvura mumutambo wemaWarriors neAngola waive wekurwira kuenda kuAfrica Cup of Nations. Sekutaura kwaMabika, nguva iyi kwaitonhora zvikuru uye Mapeza akatamba bhora zvinodadisa izvo zvakamupa kumutumidza zita iri rekuti Muchina ndokufunga kuti wei, ndipo akazoti wemajuzi sezvo panguva yacho kune mhando yemajuzi aifarirwa neveruzhinji zvikuru.
Mabika anoti Max Makaza – uyo akatambira Dynamos – akambopihwa zita remadunhurirwa rekuti ‘Skoro-skoro’ asi aisarifarira ndokumukumbira kuti amutsvagire rimwe riri nani, ndokuzomupa remumwe mutambi aitambira kuSouth Africa ainzi Skara asi achibva kuTanzania. Pana Zvirekwi, Mabika anoti akamuudza kuti zita iri akaripihwa nevatsigiri venhabvu iye ndokuseka akati anorida rakadaro.
“Mapeza akanditambira mumwe mutambo wakanetsa weZimbabwe neAngola achitamba chinzvimbo chisiri chake izvo zvakazotituma kuti timupe zita rekuti Muchina wemajuzi.
“Zvirekwi akatumidzwa zita remadunhurirwa iri paakasangana netsekwende yake yakusiiwa nendege kuNairobi. Ini ndaifunga kuti achariramba asi pandakamuudza akangoseka ndokurifarira,” anodaro Mabika.